“ယုယ - နွေးထွေးသော ဘ၀လေးတစ်ခု”: ကျောင်းတော်ဆီသို့ အလည်တစ်ခေါက်
လူတို့သည် တစ်နေရာမှ အခြားတစ်နေရာသို့ ပျော်ရွှင်မှုအဖြစ်၎င်း၊ လိုအပ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်၎င်း ခရီးများ သွားလာနေကြရပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလုပ်အတွက် ခရီးသွားခြင်း၊ ကျောင်းတတ်ရန်အတွက် ခရီးသွားခြင်း၊ စီးပွားရေးအတွက် ခရီးသွားခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများဆီသို့ လည်ပတ်ရန် ခရီးသွားခြင်း စသည်တို့အပြင် Shopping အတွက် ခရီးသွားခြင်းများအထိ ပါဝင်ပါသည်။ လူတော်တော် များများအတွက်တော့ ခရီးသွားခြင်းဟာ လူအများနှစ်သက်မြတ်နိုးသော ၀ါသနာများထဲမှ တစ်ခုဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဒါကြောင့် လည်းပဲ အားလပ်ရက် Holiday များမှာ ခရီးသွားလာကြခြင်းဖြင့် အချိန်များကို ကုန်ဆုံးစေကြပါသည်။
ကျွန်တော်သည်လည်းပဲ အပျော်ခရီး စဉ်များကို အတော်အတန် သွားလာဖြစ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ၁၀တန်း အောင်ပြီးနောက်တစ်နှစ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများပိတ်ထားစဉ်ကာလ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြသော KTA ၊ WSTM ၊ MM ၊ MMMM ၊ HT၊ THZ ၊ TTW တို့ဖြင့် ကမ်းသာယာ နှင့် ငပလီ ကမ်းခြေများသို့ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်သာ အုပ်ထိန်းသူများအဖြစ် အပျော်ခရီး သွားခဲ့ကြပါသည်။ ထိုမှတစ်ဖန် တက္ကသိုလ်များပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာလည်း ကျောင်းအဖွဲ့များဖြင့် အပျော်ခရီး များစွာ ထွက်ခဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တက္ကသိုလ်များပြီးဆုံး၍ ရန်ကုန်ရွှေမြို့ တော်ကြီး၌ သင်တန်းများ တက်နေစဉ် အခါတွင်လည်း သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတဲ့ MT ၊ HKA ၊ MMMM စသည့် သူငယ်ချင်းများဖြင့်လည်း ချောင်းသာသို့ အပျော်ခရီး ထွက်ဖူးခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ အပျော်ခရီးများစွာကို ထွက်နေဖူးသူ ကျွန်တော်အတွက် အချိန်တန်လို့ အလုပ်ဝင်တဲ့အခါတွင်လည်း အလုပ်သဘောသဘာဝကိုက ကျွန်တော်ကို ခရီးများစွာ ထွက်နေစေပါသည်။ တစ်ရံရောအခါ ကျွန်တော်တို့ Company သစ်လုံးများထုတ်ယူခွင့် ရရှိတဲ့ Permit သည် ပဲခူတိုင်း အတွင်းရှိ သစ်ဆိပ်များမှ ရယူရန်ဆိုပြီး မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း GM က ယေဘူယျသာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ ပါသဖြင့် ကျွန်တော်သည် ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ သစ်ဆိပ်များသို့ လှည့်လည်သွားရောက်ခဲ့ရပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းတွင် ပဲခူးအရှေ့ နှင့် ပဲခူးအနောက်ဟူ၍ တိုင်းဒေသ (၂)ခု ခွဲထား ပါသည်။ ပဲခူးအရှေ့ ဆိုသည်မှာ ပဲခူးရိုးမတောင်တန်းကြီး၏ အရှေ့ ဖက်ခြမ်းဖြစ်သော ပဲခူးမြို့ ၊ ဘုရားကြီး၊ ညောင်လေးပင်၊ ဖြူး၊ တောင်ငူ၊ ဆွာ စသည့် သစ်ဆိပ်ရှိသည့် မြို့ များ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ကျွန်တော်ကို ပဲခူးတိုင်းအတွင်းမှ သစ်များယူခိုင်းလျှင် ကျွန်တော်သည် အများအားဖြင့်ကျွန်တော် ဇာတိမြို့ ဖြစ်သည့် တောင်ငူမြို့ အနီးရှိ သစ်ဆိမ်များကို ရွေးချယ်ပါတယ်။ တောင်ငူမြို့ အနီးတွင်ရှိသော သစ်ဆိပ်များမှာ ပဲခူးတိုင်းအတွင်းတွင် အကြီးဆုံးလည်း ဖြစ်သောကြောင့် သစ်များ Quality ကောင်းကောင်း ရရှိနိုင်သည်ကလည်း တစ်ကြောင်း၊ အလုပ်ကိစ္စများပြီးစီးပါကလည်း မိဘများအိမ်မှာပင် နေထိုင်စားသောက် နိုင်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ သူငယ်ချင်းများနဲ့ အလွယ်တစ်ကူ တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းများ ကြောင့် အမြဲလိုလို တောင်ငူသစ်ဆိပ်များကို ရွေးချယ်မိပါတယ်။ ဒီအခါမှာတော့ တောင်ငူသစ်ဆိမ်များရှိ သစ်များကို နိုင်ငံတော် Project တစ်ခုအတွက် ယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပဲခူးတိုင်း အရှေခြမ်းရပါသော်လည်း တိုင်းမန်နေဂျာက “ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်” မှ ရွေးချယ်ပေး ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလာပါသဖြင့် ကျွန်တော်အနေဖြင့် ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်သို့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ရောက်ဖူးခြင်း မရှိသော်ငြားလည်းပဲ လက်ခံလာခဲ့ရပါသည်။ (လက်မခံလို့မှ မရတော့ဘဲကိုး... )
ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်သည် ပဲခူးတိုင်း အရှေ့ ခြမ်းရှိ အုတ်တွင်းမြို့ နှင့် ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်းရှိ ပေါက်ခေါင်းမြို့ ကြား ပဲခူးရိုးမတောင်တန်းကြီး၏ အလယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်သို့ ရောက်ရှိရန် ပထမဦးစွာ ရန်ကုန်မှ ပြည်မြို့ သို့ သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ၂၈မိုင်အကွာ ပေါက်ခေါင်းမြို့ သို့ခရီးဆက်ပြီး ပေါက်ခေါင်းမြို့ မှတဆင့် ပဲခူးရိုးမ တောင်တန်းကို ၃၅မိုင်ခန့် တတ်မှ ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်သို့ ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးဝေးလွန်း၍ သယ်ယူစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်းများကြောင့် အများအားဖြင့် Company များသည် ထိုသစ်ဆိမ်မှ သစ်များကို မယူချင် ကြပေ။ ကျွန်တော်သည်လည်း ထိုအချက်များစွာကို ကျွန်တော်၏ Director ဖြစ်သူနဲ့ အသေအချာ ဆွေးနွေးပြီးမှ ထိုသစ်ဆိပ်မှ သစ်များသယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအခါ ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်း ပြည်မြို့ သားဖြစ်သူ WYH ကို သတိရသွားကာ ပြည်မြို့ သို့ ခရီးစဉ်ရှိကြောင်း၊ လိုက်ခဲ့ချင်က လိုက်ခဲ့လို့ ရကြောင်းပြောပြခဲ့ရာ သူငယ်ချင်း WYH ကလည်း ကျွန်တော်၏ အလုပ်သဘောသဘာဝကို လေ့လာချင်၍ လိုက်ခဲ့မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ပြည်မြို့ သို့ မထွက်ခွာမီ ညတွင်ပင် ကံကောင်းစွာဖြင့် ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ MKK (သူငယ်ချင်း ဘလော့ဂါ - အဟီး. မကြိုက်မှာစိုးလို့ နာမည်ထဲ့မပြောတော့ဘူး) နဲ့ ဖုန်းပြောမိပါသည်။ သူလည်း ယခု သူ၏ဇာတိမြို့ ဖြစ်တဲ့ ဆင်မြီးဆွဲမြို့ သို့ အလည်အပတ်ရောက်နေကြောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ပေါက်ခေါင်းမှ အပြန်သူ့အိမ်တွင် ထမင်းဝင်စားဖို့ ဖိတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း၊ ရန်ကုန်ပြန်ရင် သူလည်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူပြန်လိုက်ခဲ့မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းများ ပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်တော်နဲ့ သူငယ်ချင်း WYH လည်း နောက်နေ့ မနက်စောစော ရန်ကုန်မြို့ မှ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ ပြည်မြို့သို့ မနက် ၁၀နာရီတွင် ရောက်ရှိကာ WYH အိမ်၌ ခဏနား၊ နေ့လည်စာ စားသောက်ပြီး ပြည်မြို့ မှ အေးအေးလူလူ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ သံတစ်ချောင်းလမ်းဆုံးလို့ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းကို ကွေ့သည်အထိ မိမိရဲ့ စ်ိတ်ထဲမှာ မည်သို့မျှ မခံစားမိပေ။ သိုပါသော်လည်း သံလမ်းကျော်၍ “ခိုင်ကံကော်” (ကျွန်တော်မဟေသီတို့ နေခဲ့ပါသောအဆောင်) အဆောင်လမ်းထိပ်နားအရောက် ယခင်ကျောင်းကြိုကားရပ်နေကြ နေရာအရောက်၌ စိတ်ထဲတွင် တစ်မျိုးခံစားလာမိပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ် ၅ နှစ်ကျော်က အမြဲသွားနေကျ လမ်းလေးတစ်ခုကို ယခု ပြန်ရောက်တော့မည့်အခါ စိတ်ထဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားချက်ကို ရုတ်တရက် ခေါင်းစဉ်ရှာ မရအောင်ကို ဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။ Toll Gate အကျော် လမ်းခွဲအရောက် တစ်ခါတုန်းက တက္ကသိုလ် ကျောင်းတော်ကြီးဆီမှာဘက် ချိုးအကွေ့တွင် ကျွန်တော်ရဲ့ စိတ်များ အတိတ်ဆီ ပျံလွင့်မတတ် ကစဉ့်ကလျား ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
သူငယ်ချင်း KZT ၏ အသံကျယ်ကျယ်မြည်သော ဆိုင်ကယ်ကိုခွကာ သွားလာနေကြ လမ်းကလေးကို စိတ်ထဲ ပြန်မြင်ရောင်လာ မိခဲ့ရပါတယ်။ ဤနေရာ ဤဒေသ ဤကျောင်းတော်ကြီးဆီ ဤကဲ့သို့ ပြန်လည်၍ ရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟု ဘယ်တုန်းကမျှ တွေးမထင်ခဲ့၊ စိတ်မကူးခဲ့၊ အိပ်မက်မျှ မမက်ခဲ့။ ရှေးဟောင်းပြတိုက် လမ်းဆုံလေးအကျော်မှာတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ WYH အား ကျွန်တော် ကိုယ်စား အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများရိုက်ယူပေးရန် အကူအညီ တောင်းခဲ့ပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ပုံလေးများအား WYH ၏ ရိုက်ချက်များ (သို့) အမှတ်တရကျောင်းတော်သို့ တမ်းချင်း အဖြစ် တင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
နေခဲ့ဖူးတဲ့ “မြတ်နိုး”အဆောင် (ယခုတော့ မေနိုင်းတဲ့)
ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ယူကြပြီးနောက် ပေါက်ခေါင်းသို့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါသည်။ ပေါက်ခေါင်းမှ တဆင့် ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး အလုပ်ကိစ္စများအားလုံး ညနေ (၆)နာရီဝန်းကျင်တွင် လက်စသတ်၍ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်း MKK ရှိရာ ဆင်မြီးဆွဲ မြို့ သို့ နှစ်ဦးသား ချီတက်ခဲ့ကြပါတော့သည်။ သူငယ်ချင်း MKK တည်ခင်းဧည့်ခံ ကျွေးမွေးတဲ့ ညစာကို အားရပါးရ သုံးဆောင်ကြပြီး မနက်ဖန်ည မပြန်မီ သူငယ်ချင်း MKK အားဝင်ခေါ်မည်ဟု အသိပေးခဲ့ကာ ကျွန်တော်နဲ့ WYH တို့ ပြည်မြို့ ဆီသို့ တစ်ညတာ အိပ်စက်နားနေဖို့အတွက် ည ၈နာရီ ကျော်ကျော်တွင် ပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ညချမ်းအချိန်တွင် ပေါင်းတလည်မြို့ သည်လည်း မြို့ သူမြို့ သားများဖြင့် စည်ကားနေပေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ကားကို အေးအေးဆေးဆေးမောင်းလာပြီး ကျောင်းနား အရောက်တွင် သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် ခဏဆင်း၍ မီးရောင်များအောက်တွင် ညချမ်းအလှဖြင့် ခံ့ညားတင့်တယ်နေသော ကျောင်းတော်ကြီးကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူ ခဲ့ကြပါတော့သည်။
နောက်တစ်နေ့ နံနက်စောစောထကာ ဘော်ဒါသစ်ဆိပ်သို့သွား၍ သစ်များသယ်ယူရန် စီစဉ်ပေးခဲ့ပါသည်။ သူငယ်ချင်း WYH က အတွေ့အကြုံ ယူချင်သည်ဟုဆိုကာ သစ်ကားဖြင့် ရန်ကုန်သို့ လိုက်ချင်သည်ဆိုသဖြင့် အပြန်တွင် ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲသာလျှင် သူငယ်ချင်း MKK ရှိရာ ဆင်မြီးဆွဲမြို့ သို့ ထွက်လာ ခဲ့ရပါတော့သည်။ သူငယ်ချင်း MKK အားဝင်ရောက်ခေါ်ဆောင်ပြီး မောင်စိန်ဝင်း၏ ဇာတိချက်ကြွေ မွေးရပ်မြေဖြစ်သော ပုတီးကုန်းမြို့ ကိုဖြတ်ကာ ၀က်ပုတ်မှတဆင့် ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်သို့ မောင်းတက် ခဲ့ပါတော့သည်။ စကားများ ဖောင်ဖွဲ့လိုက်၊ သီချင်းများနားထောင်လိုက်နဲ့ ပြည်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက် သူငယ်ချင်းMKK နှင့် ပြောဖြစ်ခဲ့သော အခြားသူငယ်ချင်း အကြောင်းကတော့ အခုတော့ဖြင့် မှုံဝါးဝါးရယ်သာ။ ညသန်းခေါင်ယံ အချိန်တွင်တော့ မဟာရန်ကုန်ရွှေမြို့ တော်ကြီးဆီသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကာ သူငယ်ချင်း MKK အား တောင်ဥက္ကလာသို့ ပြန်ပို့ပေးခဲ့ပြီး အတွေးပေါင်း မြောက်များစွာရယ်ဖြင့် နေထိုင်ရာ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်ဆီရယ်သို့သာ။
ကျွန်တော်ရဲ့ ခရီးစဉ်အတွက် အဖော်အဖြစ်လိုက်ပါပေးကြသော သူငယ်ချင်း WYH နဲ့ သူငယ်ချင်း MKK တို့အား ဤနေရာမှနေ၍ ကျေးဇူးအထူးပင် တင်ရှိပါကြောင်း။
၀န်ခံချက်။ ။ ကျွန်တော်မဟေသီနဲ့ မမျှော်လင့်ဘဲ အတိတ်အကြောင်း ပြန်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြရင်း ရေးသားထားတဲ့ 2006 ခုနှစ်က ခရီးစဉ်လေးပါ။
Posted by Yu Ya at 8/19/2009 09:41:00 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အေးနော်.... နောင့် က တောင်ငူမှာ ကျောင်းပြီးတာ... ကျောင်းပြီးထဲက တောင်ငူ လဲ တစ်ခေါက်မှ ပြန်မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး.... ခု ပြန်ရင်တော့ ပြန်လည်မယ် စိတ်ကူးတယ်..... တစ်ခုခုကို အရမ်း လွမ်းနေမှာပဲ....။
အင်းးးးး နေခဲ့ဖူးတဲ့ မြို့လေးတွေအများကြီးပဲ ငယ်သေးတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူးရယ် ပြန်တွေးလိုက်ရင်တော့ လွမ်းသလိုရှိသား ကိုယုယရယ်
သစ်တွေ လုပ်တဲ့ ကုန်ပနီကြီးဆိုတော့ သူထိန်းတွေပေါ့နော် ။
ပါမစ်ကျအောင် အဲဒီ အဘတွေကို ဘယ်လောက်ပေးရလဲဟင် ။ သိချင်ပါတယ် ။
ကျွန်းသစ်ဈေးလေးရော ဘယ်လောက်ပေါက်ပါသလဲ ။
ဟီးး ။ ဒို့ ရွှေပြည် ပြန်ပြီး ..သစ်ရောင်းစားမယ်ဟေ့ (အရင်းအနှီး မတတ် နိုင်၍ ထင်းနှင့် မီးသွေး ကို ဆိုလိုသည် )။
မဟေသီနဲ့ အတိတ်အကြောင်းလေးတွေလည်း ရေးပါဦး =)
ဟုတ်ပါတယ် မဟေသီနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းကနေ ပေါင်းစည်း တဲ့အထိ ရေးပေးပါ ...။ကွန်မန့်မှာ တခါထဲ tag သွားပါ တယ်...။
ခရီးသွားရတာ ပျော်ဘို့ကောင်းတယ် ဂျစ်လည်းခရီးသွား
အော .. ကိုယုယက ပြည် က ကျောင်းပြီးတာလား...
ငယ်က မိထ္တီလာ က ပြီးတာ...
ငယ်လည်း ကျောင်းတုန်းက အကြောင်းတွေပြန်ရေးမလို့ဗျ...
မကြာမီ လာမည် မျှော် (ဘယ်သူကမျှော်တယ်ပြောလို့တုန်း... )
လွမ်းမောဖွယ်ရာ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ တချိန်က
အကိုရေ ကျောင်းတော်ကြီးဆီ အလည်တစ်ခေါက် ရောက်ပါတယ်
ဟိုးအရင် ကျောင်းသားဘဝတွေကို ပြန်သတိရမိသွားတယ် အကိုရေ
ကွန်မန့်တွေပေးခဲ့သလိုပဲ အကို့မဟေသီနဲ့တွေ့ဖြစ်ပုံလေး ပို့စ်တင်ပါဗျို့.....
အခုလို ခရီးသွားခဲ့တဲ့ နေရာဒေသတွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ တင်ပြပေးတော့ ဗဟုသုတ ရတာပေါ့ ကျေးဇူးပါ မွေးမြေဖြစ်တဲ့ အမိမြေကို အခွင့်ရလို့ ပြန်တော့မှပဲ အဲ့ဒီမြို့ တွေကို တ၀ကြီး လျှောက်လည်ပစ်လိုက်မယ်ဗျာ
အဲ့ခါကျရင် ကိုကြီးယုယနဲ့ မဟေသီ
ဟိုင်းးးးး ကိုယုယ))))) ပြည်.ပေါင်းတလည်.ပေါက်ခေါင်း..ဆင်မြီးဆွဲ....
အနော့်မှာပေါက်ခေါင်းမှာလည်းအမျိုးရှိတယ် ဂတ်စ်ဟောက်စ်ကို စက်ဘီးနင်းသွားရတဲ့မြေနီလမ်းလေးကို လုံးဝမမေ့ဘူး။
ပြည်နဲ့ပေါင်းတလည်ကတော့ မေနဲ့ဖေတို့ဇာတိလေ..သူတို့ကရန်ကုန်ရောက်မှသာအကြောင်းပါတာ..ပြည်ဇာတိဆိုတော့ အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လို မကြာခဏရောက်တယ်..စိတ်ကူးပေါက်တိုင်း ဆိုးကနဲးဆတ်ကနဲသွားတတ်တဲ့အရပ်ဒေသတစ်ခုပဲ....ကိုယ်သိတဲ့နေရာလေးတွေသွားဖူးတဲ့နေရာလေးတွေဖတ်ရတာကောင်းလိုက်တာ
ကိုယုယရေ..ရောက်ပါတယ်...ကာရံလည်းခရီးသွားရတာ ပျော်တယ်...ခဏခဏလည်း သွားဖြစ်တယ်...အဲ့ဒီမြို့ တွေကိုတော့ ခရီးသွားရင်း ဖြတ်ဖူးတယ်...ကိုယုယက တောင်ငူသားဆိုတော့ နတ်သျှင်နောင်နဲ့ ဘာတော်လဲ :P...ပြည်မြို့ က မလိုင်လုံး မြေအိုးလေးတွေနဲ့ အရမ်းကြိုက်တယ်...ဆံတော်ရှင်ဘုရား လေးမျက်နှာဘုရားလဲ ရှိတယ် ဟုတ်...အင်း ဒီတစ်ခေါက် ပြန်ရင် ခရီးထွက်ဦးမယ်...မဟေသီနဲ့ အကြောင်း အားလုံးတောင်းသလို တောင်းလို့ ရမလား...မျှော်နေမယ်...:)
အစ်ကို ယုယ ရေ .... တအူတုန်ဆင်း အမျိုး တ၀မ်းကွဲ တွေပါပဲ .... ပြည် တော့မရောက်ဘူးဘူး ... အလားတူ နှင်း တို့ကျောင်းတော်မြေကြီးကိုလည်း လွမ်းမိသွားတယ်...။အတိတ်ကို ပြန်မတွေးချင်လို့ မရေးတော့ပါဘူး အစ်ကိုရာ.............;(
ညလေး နှင်းးp
ပြည်ကိုတောက်ရောက်ဖူးတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက...အမျိုးတွေကတော့ ပုတီးကုန်းတို့ ၊ ပေါင်းတည်တို့ မှာချိလယ်...လွမ်းချာကြီး မရောက်တာ နှစ်တွေလည်းကြာပေါ့
အတိတ်ရဲ့ အရိပ်တွေကိုပြောပြီး ကြည်နူးရတာ
သိပ်ပျော်စရာကောင်းတယ် အစ်ကိုရေ ပြည် တော့ တစ်ခေါက်လောက်ရောက်ဖူးတယ် လှပ တဲ့ မြို့ လေးပါ ..... :D
I know these photos and places in this post because I am from Pauk Khaung.
“ကျွန်တော်နဲ့ မဟေသီ ပေါင်းစုံခြင်း”
“ကျွန်တော်နဲ့ မဟေသီ ဆုံစည်းခြင်း”
“ ရှိသေးရင် နည်းနည်းပေးပါ ”
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခြင်းရဲ့ ... လျှို့ ၀ှက်ချက်
Just Graduated & Educated
The Present Status...
Singapore National Day 2009 Preview Parade